Farmaajo oo muujiyay in uusan ka tanasuleynin mowqifkiisa doorashadda | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo muujiyay in uusan ka tanasuleynin mowqifkiisa doorashadda
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku adkeestay in uu fulinayo heshiiskii doorashada, oo daarashadu ay dhici doonto waqtigeeda, ayadoo mucaaradka iyo Maamulka Axmed Madoobe ay diideen.
Sida ay Keydmedia Online hore usoo qortay maanta, Madaxweynaha ayaa ku adkeystay mowqifkiisa, wuxuuna ku sheegay qoraalka uu soo saaray baraha dowladda in xukuumadiisa ay ka go'an tahay in "fuliyo heshiiskii doorashada iyada oo laga fogaanayo dib-u-dhac ku yimaadda xilliga doorashada'.
Farmaajo oo dhega tirayo baaqa mucaaradka iyo Maamulka Axmed Madoobe ee Jubbaland, ayaa ugu baaqay Maamullada Jubbaland iyo Puntland in ay soo dhameystiraan guddiyada doorashootinka.
"Waxa aan Dowlad Goboleedyada aan weli soo dhammaystirin xubnaha ay ku leeyihiin guddiyada hirgelinta doorashooyinka ugu baaqayaa inay ka shaqeeyaan sidii looga dhabayn lahaa qodobbadii iyo hab-raacyadii lagu heshiiyay, aniga oo rajaynaya inay sida ugu dakhsaha badan u soo magacaabi doonaan qaybta ku hartay,” ayuu yiri Farmaajo.
Muranka Axmed Madoobe & Farmaajo
Hogaamiyaha Maamulka Jubbaland Axmed Madoobe iyo Farmaajo ayaa waxaa ka dhaxeeya Khilaaf siyaasadeed xooggan, oo ku qotoma doorashooyinka kadib markii Villa Somalia ay diiday inay Ciidanka Gedo kasoo saarto kuna wareejiso maamulka doorashadda lagu qabanayo Garbahaarey.
Axmed Madoobe oo isbaaro dhigtay ayaa dhawaan shaaciyay in Jubbaland aysan ka dhacaynin doorasho, hadii uu Farmaajo diido inuu kusoo wareejiyay maamulka Gedo.
Wuxuu ku eedeeyay Farmaajo inuu Jabhado ka abuuray gobolka, oo hadda maamulkiisa loo dhiibay dad laga keenay Caasimadda dalka oo aan matelaynin danta dadka degaanka. Axmed Madoobe oo isaga xoog ku qabsaday Kismaayo ayaa balan-qaadey inaysan doorasho ka dhacaynin Jubbaland, illaa gacantiisa lagu soo celinayo Gedo.
Dhanka kale, Midowga Musharixiinta ayaa soo saarey qoraal ay ku sheegeen in tallaabada ay "Guddiga sharci darrada ah" guddoonka ku doorteen ay tahay mid Farmaajo isaga dhega tirayo baaqii Musharixiinta ee ahaa in la qabto doorasho la isla ogol ahay.
Waxay sheegeen in Farmaajo oo qaadi doono mas'uuliyadda cawaaqibka ka dhasha diidmada in dalka ay ka dhacdo doorasho ku dhacda waqtigeeda, oo xor iyo xalaal ah, iyagoo intaas raaciyay inay qaban doonaan shir kale oo looga hadlayo badbaadinta dalka iyo kahor tagga firaq Dastuuri ah.
Musharixiinta ayaa magacaabey gudiga badbaadada doorashadda Soomaaliya oo ka kooban 28 xubnood, waxaana muuqata inay ka dhabeynayaan qabashadda doorashooyinka, hadii Farmaajo ku adkaysto go'aankiisa.
Siyaasadda Madaxweyne Farmaajo oo dalka galisay fowdo iyo qalalaase, ayaa shabahda middii Siyaad Barre.